Atsaharo ny modely Bluetooth an'ny Mac anao raha manana olana amin'ny fifandraisana | Avy amin'ny mac aho
Mety manana fitaovana maro mifandray amin'ny Bluetooth isan'andro ianao, mety tsy tadidinao akory, satria nampifandraisinao tamin'ny voalohany, ary tsy niteraka olana izy ireo nanomboka teo. Miresaka momba ny kitendry, totozy, trackpad na mpandahateny izahay, ankoatra ny hafa. Nefa Raha manomboka manana olana amin'ny fifandraisana izy ireo, izay inoana fa tsy amin'ny Mac, dia mety mila mamerina ilay maody Bluetooth ianao.
Alohan'ny hanaovana an'ity dingana ity dia mamporisika anao izahay hamono ny peripheral izay mifamatotra, amin'ny famafana ny herinaratra, na ny herinaratra na ny andry ary hamerina azy io indray hanamarinana ny fiarahany. Raha tsy manamboatra azy io dia araho ireto dingana ireto.
Talohan'izay dia tadidio fa ny klavitry ny iMac na Mac mini dia afaka ampifandraisin'ny Bluetooth, ary koa ny totozy na Trackpad. Araka izany, tsy maintsy manana ny fanoloana an'ireny peripheraly ireny ianao amin'ity tranga ity amin'ny alàlan'ny fifandraisana tariby, satria mandritra ny famerenana amin'ny laoniny dia ajanona ivelan'ny seranana izy ireo. Raha nandray an'io ianao dia vonona ny hamerina indray.
voalohany, ny marika Bluetooth dia tokony hiseho ao amin'ny menio fisehony. Raha tsy manana ianao, hampiantso azy tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Mandeha Taratasy rafitra.
Ao amin'ny varavarankely pop-up, kitiho ny safidy izay miseho eo ambany: Asehoy ny Bluetooth ao amin'ny tsipika menio. Ny marika Bluetooth dia tokony hiseho eo amin'ny tsoratadidy.
Dia mila izany miantso ny menio Bluetooth miafina. Tsindrio ny bokotra Shift and Option (alt), safidio ny marika Bluetooth avy amin'ny tsipika menio.
Avotsory ny lakile ary ho hitanao ny menio miafina.
Midira amin'ny safidy Debug.
Safidio safidy Avereno ny modely Bluetooth.
Farany, hamerina ny Mac anao.
Raha vao tafaverina indray dia tokony ho voavaha ny olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitaovana.
Ny menu Debug dia manana safidy roa hafa izay holazainay izao: Avereno amin'ny toeran'ny orinasa amin'ny fitaovana Apple rehetra mifandray. Amin'ity tranga ity dia avereno azafady amin'ny alàlan'ny fananganana orinasa ny kojakoja Apple rehetra. Safidy mahaliana io, raha nanao ireo dingana teo aloha ianao nefa tsy nahomby.
Farany, Fafao ny fitaovana rehetra, Ilaina io rehefa te-hampifandray ireo fitaovana rehetra izahay, noho ny olana amin'ny fifandraisana na mampifandray azy ireo amin'ny Mac hafa akaiky ary manalavitra ny fanelingelenana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Atsaharo ny modely Bluetooth an'ny Mac anao raha manana olana amin'ny fifandraisana ianao
Tsy mandeha amiko ny fitendry, raha ny totozy. Ahoana no ahafahako miditra amin'ny menio debug raha tsy afaka manoratra (alt-safidy) eo akaikin'ny (Mey) aho?
Elena Fdez. dia hoy izy:
Ary raha nanjavona ny safidin'ny Bluetooth tamin'ny tontonana preferences ????
Valiny tamin'i Elena Fdez.
Andres Saldarriaga dia hoy izy:
Ny imac dia namono tampoka ny Bluetooth sy nandritra ny fotoana fohy isan'andro ... fantatrao ve ny antony hitrangan'izany?
Valiny tamin'i Andrés Saldarriaga
Niseho tamiko ny Bluetooth tsy misy, saingy tsy mampiseho amiko ny safidy debug miaraka amin'ny hitsin-dàlana, misy fomba hafa ve?
Norbey Felipe Lopez Avila dia hoy izy:
Salama atoandro namana, nomen'izy ireo fampahalalana momba ny vahaolana amin'ity olana ity ve ianao? Izany koa no mitranga amiko.
Valiny tamin'i Norbey Felipe Lopez Avila
Luis Sanda dia hoy izy:
Salama, milaza ny Bluetooth TSY AZO IZAO, saingy tsy mampiseho amiko ny safidy debug, misy fomba hafa ve? Misaotra anao
Valiny tamin'i Luis Sanda